Huawei Mate 30 waxaa laga daawan doonaa Nofeembar Yurub | Androidsis
Huawei Mate 30 wuxuu imaan doonaa Yurub bisha soo socota
Wax yar ka hor bil ka hor Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro ayaa la soo bandhigay xaflad ka dhacday Munich. Dhamaadka-dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ayaa loo soo bandhigay inay tahay nooc aad u xoog badan oo xiiso weyn u leh dadka isticmaala adduunka. Maaddaama ay yihiin taleefanno leh shaqooyin dan weyn iyo waxtar. In kasta oo maqnaanshaha codsiyada iyo adeegyada Google ay xadideyso fursadahaaga guusha.
Tani waa sababta aan noocani weli uga bilaaban Yurub. Waxay ahayd bil in la filayo in la ogaado goorta ay Huawei Mate 30 iman doonaan qaaradda Yurub. Waxay u muuqataa in ugu dambeyntii ay jiraan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bilawgan rasmiga ah ee taleefannada.
Waxay u muuqataa in ugu dambeyntii sumaddu ay diyaar u tahay soo saarista taleefannadan. Sida la muujiyay, Huawei Mate 30 imaan lahaa bartamaha Nofeembar suuqa Yurub. Markii hore waxaa lagu soo bandhigi lahaa suuqyo taxane ah, oo ay Spain ka mid tahay sidoo kale laga heli lahaa.
Noocyada kala duwan ee taleefannada ayaa ah kuwa ugu iibsiga badan Shiinaha. In kasta oo Yurub ay ka jiraan shaki ku saabsan fursadaha ay ku guuleysan karto, maxaa yeelay iyagu ma lahaan lahaayeen barnaamijyada iyo adeegyada Google. Intaa waxaa dheer, wali waa qarsoodi haddii taleefannadan ay suurtagal noqon doonto in lagu rakibo barnaamijyadan.
Qiimaha noocyadan taleefanada ah ayaa lagu muujiyay bandhigga magaalada Munich. Huawei Mate 30 wuxuu ku kici lahaa 799 euro markii la bilaabay Yurub. Mate 30 Pro wuxuu lahaan lahaa qiimo dhan 1.099 euro, halka nooca 5G ee nuucaan ah Pro lagu bilaabi doono qiimo dhan 1.199 euro. Qiyaasta qiimaha ayaa qaban doona kiiskan.
Waa inaan ka sugno waxoogaa xaqiijin ah nooca Shiinaha. Laakiin waxay u muuqataa taas bilaabista Huawei Mate 30 ayaa ku dhow dhow. Waa nooc tayo leh, oo wax badan u soo bandhigaya isticmaaleyaasha. In kasta oo maqnaanshaha barnaamijyada Google ay yihiin wax xaqiiqdi xaddidaya fursadahaaga guusha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 30 wuxuu imaan doonaa Yurub bisha soo socota
Xiaomi ayaa soo bandhigi doonta saacadeeda Wear OS usbuuca soo socda
Xanta kala duwan ayaa soo jeedinaysa in Google ay iibsan karto Fitbit